2017 May 02 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
DOWLADDA PUNTLAND WASAARADDA DEEGAANKA, DUURJOOGTA & DALXIISKA
LA OGAADAY: Nabadsugida & Sirdoonka Soomaaliya oo helay Xog ku aadan weeraro Qorsheysan & PTIMES oo ogaatay halka lagu waday.
MUQDISHO(P-TIMES)- Hay’adda Nabadsugidda & Sirdoonka Soomaaliya ayaa dagaal adag kula jirta shabakado isku xiran oo Argagixiso, waxana Taliska Hay’addaas uu hadda la yimid siyaasad cusub oo lagu yareynayo qaraxyada iyo dilalka qorsheysan ee marar badan ka dhaca gudaha caasumada dalka. Nabadsugida ayaa heshay xog cadeynaysa in ay kooxaha Xagjirka ah weeraro ku qaadi doonaan xarumaha […]
May 2, 2017No CommentRead More
DEG DEG: Raysalwasaaraha Somalia oo amar cusub galabtay kusoo rogey Wasiiraddiisa iyo Hadal heyn xasaasi ah oo bilaabatay
MUQDISHO(P-TIMES)- Raysalwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa galabtay amar buuxa ku bixiyey in xubnaha Wasiiradda cusub ee dawladdu ay soo gudbiyaan Liiska saxda ah ee Shaqaalaha Wasaaradahooda, si loola dagaalamo Musuqmaasuqa. Raysalwasaaruhu wuxuu cadeeyey in ay jiraan shaqaale aan tagin xarumaha dawladda Soomaaliya, isla markaasna mar kasta qaata mushaarka xaquuqda Shaqaalaha dawladda. Talaabadaas […]
DHAGEYSI XASAASI AH: Guddiga Qabanqaabada Shirka LONDON ee DFS oo shaaciyey war xasaasi ah
MUQDISHO(P-TIMES) – Shir xasaasi ah ayaa saaka Muqdisho uga furmay DF, Dawlad gobaleedyad & wakiilada caalamiga ah, kaas oo lagu gorfeynayay arrimaha looga hadli doono shirka LONDON ka dhacaya bishan May 10, 2017 dalka Ingiriiska. Falanqeyn dheer ka dib waxay isku raaceen dhinacyadu in ay noqdaan arrimaha laga doodayaa afar qodob oo ay ka dhalan […]
DHAGEYSO: M/weyne Kuxigeenka Puntland oo Buuhoodle uga dhawaaqay war cusub
BUUHOODLE(P-TIMES)- Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cabdullaah Cumar Camey oo tagay deegaanada xarifka ugu shisheeye ee gobalka uu ka soo jeedo ee Cayn ayaa cadeeyey in aysan waxba ka jirin in gobalka Cayn uu yahay meel lagu muransan yahay. Madaxweyne kuxigeenka ayaa si kulul u cambaareeyey oraahdaas oo ay inta badan adeegsadaan Hay’addaha […]
DHAGEYSO: Warbixin xasaasi ah oo laga soo saaray Weerarada Burcad Badeeda Soomaalida & Waxyaabaha keenay hadda
Warbixin cusub oo ay soo saartay hay’adda ka shaqaysa amniga badaha ee Oceans Beyond Piracy ayaa sheegaysa in feejignaantii maraakiibta ka gooshaysa badaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay, taasina ay keentay halis laga qabo in budhcad badeedu dib usoo laabato. Warbixintan oo sannadle ah ayaa looga hadlay khasaaraha naf iyo […]
DHAGEYSO: Saraakiil kamid ah Al- Shabaab oo isku dhiibey Jubbaland+MAGACYADOODA
KISMAAYO(P-TIMES)- Wasiirka Amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo la hadlay idaacada codka Mareykanka ee VOA-da ayaa daaha ka rogay in ay isku soo dhiibeen Saraakiil mudo dheer katirsanaa kooxda Al- Shabaab. Wasiirka ayaa sheegay in ay Saraakiishan iska soo dhiibeen gobalka Gedo, wuxuu cadeeyey in ay hayeen xilal muhiim oo ay ka mid yihiin […]
AKHRISO+CADEYN XASAASI AH: RW Kheyre oo warqad amar ah u diray Wasaaradda Maaliyada, Arrimo banaanka u soo baxay
MUQDISHO(P-TIMES)- Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa warqad rasmi ah oo ka soo baxday xaafiiskiisa u diray Wasiirka Maaliyada ee dawladda Faderaalka, taas oo amar buuxa lagu siinayo Madaxda Wasaaraddaas. Sidda ku cad warqada wuxuu Raysalwasaaruhu garab maray sharuuc badan, sidda ay dhawaan daabacday Garyaqaanka guud ee dawladda Soomaaliya. Canshuur dhaafka ay sameyso dawladda ayaa […]
FALANQEYN XASAASI AH: Qabqable Muuse Suudi Yalaxow & Kooxdiisa oo bilaabay qorshe halis galinaya rajada Soomaaliya?
MUQDISHO(P-TIMES)- Golaha Aqalka Sare dawladda Soomaaliya ayuu Muuse Suudi Yalaxow oo horey aad ugu caan-ahaa gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ayaa dhawaan ka hor sheegay hadal u muuqday cuqdad iyo meeshii xumeyd ee laga keenay Soomaaliya in uu dib ugu celinayo. Qabqable Muuse Suudi oo ay ka muuqato xumaanta iyo xaasidnimada u qabo nabadda iyo daganaanshaha Puntland […]
AKHRISO+MAGACYADA: Yaa kamid ah Xubnaha M/weyne Gaas xilalka ka qaadi doono ee G Mudug?
GAALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lafilayaa in uu wax ka bedel kusameeyo Hanaanka maamul ee gobalka Mudug ka hor inta uusan u dhoofin dalka UK, oo uu kaga qeybgali doono shirka Hogaamiyaasha Soomaalida & Wakiilada caalamiga ah dhexmari doona. Si weyn ayaa looga hadal hayaa magaalada Gaalkacyo isbedelada la xariira […]
WAR DEG DEG AH oo naga soo gaaray Buuhoodle & Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo…….
BUUHOODLE(P-TIMES)- Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cumar Camey ayaa kusugan magaalada Buuhoodle, wuxuuna tagay saaka deegaano hoos yimaada magaaladaas, oo ay hadda ka jiraan xaalad adag oo dhimasho ay u dhinteen in ka badan 180 qof. Wararka ayaa sheegaya in uu Madaxweyne kuxigeenka Puntland tagay deegaano hoos-yimaada magaalada Buuhoodle. Isbitaalka Daryeel oo ah […]